UApple angabonisa iApple TV entsha ehambelana ne4k kunye neHDR | Iindaba zeGajethi
I-Apple inokuzisa i-Apple TV entsha ehambelana ne-4k kunye ne-HDR
Nangona iApple ihlala ithatha ngokuzolileyo, kubonakala ngathi iApple TV iyaqhubeka nokuba sisixhobo esisiseko kwindalo yayo, ubuncinci yile nto ithethwe nguTim Cook izihlandlo ezininzi, hayi ngenxa yokuthengisa kwayo, kodwa ngenxa yokusetyenziswa okunxulumene nayo iTunes. Isizukulwana se-4 se-Apple TV sangena kwimarike ngo-2015, iminyaka emithathu emva kwemodeli yesizukulwane se-3 kwaye yayiyeyomhla.
Kodwa hit kwimarike ngaphandle kwenkxaso ye-4k kunye nomxholo we-HDR, Into abasebenzisi abaninzi abangayiqondiyo ncam ukuba sisixhobo ngehardware esinokuyivelisa ngaphandle kwengxaki. Kubonakala ngathi iApple ifuna ukubonelela ngezi ndlela kwi-Apple TV entsha enokubona ukukhanya kungekudala.
Eyona nto intsha isizisileyo inxulumene nevenkile yesicelo sayo, ivenkile eyayisivumela ukuba sifake usetyenziso ngokungathi yi-iPhone okanye i-iPad, elungele ukonwabela imidlalo oyithandayo kwiscreen esikhulu sekhaya lethu. Uhlobo olulandelayo lwe-Apple TV lunokuwa, njengoko umsebenzisi ovela e-United Kingdom efumene kwimbali yabo yokuthenga, bekuya kuba kukuqala ukufikelela kwizivumelwano nabasasazi kuzo. unikeze umxholo kwi-4k kunye ne-HDR esemgangathweni.
Okwangoku iApple ibonelela ngomxholo kwi-720p kunye ne-1080p esemgangathweni, zombini ngamaxabiso ahlukeneyo. Ngokongeza lo mxholo mtsha, iApple iya kwandisa iinketho zokurenta kodwa nayo uya kunyanzela abasebenzisi be-Apple TV ukuba bathenge isixhobo esitsha esixhasa olu hlobo lomxholo, I-ace up sleeve yayo egcinwe yiApple xa zazisa imodeli yesizukulwane sesine, imodeli ehambelana ngokugqibeleleyo nomxholo we-4k, ine-HDMI inguqulelo 1.4 ehambelana nalo mxholo, kodwa loo nto igutyungelwe yisoftware.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umfanekiso kunye nesandi » Ukusasaza » I-Apple inokuzisa i-Apple TV entsha ehambelana ne-4k kunye ne-HDR
I-Uhans A6, amandla ezandleni zakho ngaphantsi kwe-euro engamashumi asibhozo